DN: Frp oo raba in wasaarada cadaalada la hoos geeyo Listhaug - NorSom News
DN: Frp oo raba in wasaarada cadaalada la hoos geeyo Listhaug
Sida uu maanta qoray wargeyska Dagens Næringsliv oo soo xiganayo siyaasiyiin katirsan xisbiyada Frp iyo Høyre, xisbiga Frp ayaa rabo in wasaarada cadaalada iyo amaanka la hoos geeyo dalka Norway la hoos geeyo Sylvi Listhaug oo hada ah wasiirka arimaha soo galootiga iyo isdhexgalka bulshada.
Wasiirka cadaalada Norway ee hada, Per-Willy Amundsens ayaa loo badinayaa in xilka laga qaadi doono dhawaan, waxaana su´aal badan ay ka taagantahay cida badali laheyd booska uu baneyn doono.
Wasaarada cadaalada ayaa ah mid hada u qeybsan laba qeybood oo kala duwan, waxeyna ka koobantahay Cadaalada iyo amniga oo uu Willy wasiir ka ahaa iyo soo galootiga iyo isdhexgalka bulshada oo Listhaug boqorod ka tahay. Frp ayaa rabo in labadaas qeybood la isugu geeyo hal meel, isla markaana wasiir looga dhigo Sylvi Listahug. Waxeyna arintaas Listhaug siin doontaa awood aad uga badan, mida ay hada heysato.
Wasaarada cadaalada ayaa ah wasaarada inta badan laga maamulo hey´adaha iyo laamaha ka shaqeeyo arimaha soo galootiga. Waxaana hoos tago UDI-da, UNE iyo Landinfo.
Frp iyo Høyre ayaa isku raacsan in siyaasad adag oo mid ah lagu dhaqo wasaarada cadaalada, laakiin lama ogo qaabka ay Høyre u yeeli doonaan in wasaarada cadaalada loo dhiibo Listhaug oo ah siyaasad caan ku ah hadal qalafsanaan.
Previous articleDacwad ooge maxkamada Hedmark ka dalbaday in 9 sano lagu xukumo wiil Soomaali ah oo ku eedeysan kiis isku dey dil
Next articleSweden: Ururada muslimiinta oo codsaday in la adkeeyo amaanka masaajida